ललिपप खुवाएर धर्म परिवर्तन गराईंदैछ ( भिडियो सहित ) - Kendrabindu Nepal Online News
ललिपप खुवाएर धर्म परिवर्तन गराईंदैछ ( भिडियो सहित )
प्रदेश ३, राष्ट्रिय, विशेष, समाचार
हिजोआज नेपालमा धार्मिक आस्था परिवर्तन गर्ने लहड नै चलेको छ । खासमा मानिसहरुको सोचाई परिवर्तन भएर यस्तो भएको हो । एक त बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु विदेशी धर्म प्रति लोभिन्छन् भने स्वदेशमै भएकाहरु प्रति पनि विभिन्न लोभ देखाएर धर्म परिवर्तन गर्ने र गराउनेहरुको संख्या वढेको छ ।
खासमा यस्तो किन हुन्छ त ? यतिबेला यो प्रश्नले धेरैलाई जिज्ञासु बनाएको हुन सक्छ । के हिन्दु धर्म साँच्चै नै गलत छ वा यस भित्रका विविध पक्षहरुलाई समय अनुसार सुधार गर्नुपर्ने हो ? नत्र किन मान्छेहरु धर्म परिवर्तन गरिरहेका छन् त ?
यी विभिन्न जिज्ञासाहरुको समाधानका लागि यसपटक केन्द्रविन्दु टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै एकजना धार्मिक अभियन्ता चैतन्य कृष्णले यसका धेरै कुराहरु खुलेर चर्चा गरेका छन् । हेरौं उनीसँगको कुराकानी यो भिडियोमा :
सहमतिविना जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराए पाँच वर्ष कैद
अब धर्म परिवर्तन गराए देश निकाला हुने !